Fitsidihana An’i Italia | Tany sy Mponina
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Letonianina Litoanianina Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
Fitsidihana An’i Italia
AHITANA zavatra samy hafa any Italia: Ny any atsimo mafana manevokevoka, nefa ny any avaratra mamirifiry. Betsaka ny toerana feno torapasika, nefa maro koa ny tendrombohitra mitomandavana. Be volkano any saingy vitsy ihany sisa no atahorana hipoaka, anisan’izany i Stromboli sy Etna.
Iray amin’ireo tany be mponina indrindra any Eoropa i Italia. Betsaka ny mpifindra monina efa nandalo tany. Anisan’izany ny Arabo, Grika, Fenisianina, ary koa ny olona avy any Byzance sy Normandia.
Mitaingina lakana atao hoe gondole ny mpizaha tany, rehefa mitsidika an’i Venise
Maro toerana manan-tantara sy vakoka sarobidy any. Ao, ohatra, ireo tanàna rava tamin’ny andron’ny Grika sy Romanina. Eo koa ireo trano sy zavakanto naorina tamin’ny andro fahiny. Tena miavaka ireo sarivongana vita amin’ny marbra, sy hoso-doko, ary dobokely misy rano mifantsitsitra, izay sangan’asan-dry Bernin sy Michel-Ange ary Raphaël.
Tia mikarakara sakafo ny Italianina, ary efa manana ny fanaony mampiavaka azy izy ireo: Paty matetika no arosony aloha, ary hena na trondro miaraka amin’ny legioma aorian’izay. Mpamokatra menaka oliva ny any ka tena mampiasa azy io ny olona. Sakafo mampahalaza an’i Italia ny pizza, sy ny risotto izay vary nafangaro trondro na hena.
Foto-tsakafon’ny Italianina ny paty
Sariaka sy tia mandray vahiny ny olona any. Maresaka be koa ry zareo rehefa tafaraka. Misy olona miresaka foana àry hita mandehandeha na mipetrapetraka eny rehetra eny.
Katolika ny ankamaroan’ny olona any nefa vitsy ihany no mandeha miangona. Tsy dia manaraka ny fampianaran’ny Eglizy intsony koa ny Italianina tato ho ato. Maro mantsy no mihevitra fa tsy ratsy ny manala zaza sy misara-panambadiana.
Mandroso be ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah any Italia. Fantatry ny olona izy ireo hoe mampianatra Baiboly sady mampihatra izay lazain’izy io. Mizara ho fiangonana 3 000 mahery izy ireo, ary miezaka mitory amin’ny olona miteny vahiny. Tena ilaina izany satria lasa avo telo heny ny vahiny mipetraka any Italia, tato anatin’ny folo taona.
Na dia any Roma aza no misy an’i Vatikana, dia tany iray mahaleo tena izy io, nanomboka tamin’ny 1929. Firenena vahiny àry izy io amin’ny Italianina.
Tendrombohitra atao hoe Dolomites, any avaratratsinanana
Mponina: 61 000 000
Toetany: Lava ny vanin-taona mafana any atsimo ary tsy mangatsiaka loatra rehefa ririnina. Ny any avaratra kosa mamirifiry be ny ririnina
Vohon-tany: Be tendrombohitra any, ary efa ho 7 500 kilaometatra ny morontsiraka
Hizara Hizara Fitsidihana An’i Italia